China High-grade Lancome uthotho ulusu ukupakisha iibhotile zeglasi mveliso kunye nabathengisi | Jiamei
Uthotho oluphezulu lweLancome lweebhotile zokupakisha izikhumba zamadoda
Craft: Screen yoshicilelo, bexhentsa eshushu, frosting, ileyibhile, umbala yoshicilelo kunye nabanye
Iibhotile zeCream: 30g, 50g
Yenza amanzi kunye neebhotile zokuthambisa: 40ml, 80ml, 100ml, 120ml
Ukusetyenziswa: Cream, amanzi mak-up kunye into yokuthambisa
Lancome uthotho lwamadoda okuphatha ulusu ngokupakisha iibhotile zeglasi
I-DHL, i-Fedex, i-UPS, imithwalo yomoya, ulwandle
Njengoko isicelo sakho
Ingqokelela ye-Lancome Cosmetics yaMadoda yenye yeeseti ezimbalwa zezithambiso ezifumanekayo zamadoda.Yenziwe ngeglasi ekumgangatho ophezulu, eyahlula izinto zokuthambisa kwilizwe langaphandle kwaye ithintela umphunga kunye nongcoliseko lotywala. Nceda uqiniseke, iimveliso zenkampani yethu ziyahambelana nemigangatho yesizwe, ayisiyomsebenzi onamandla kuphela, umbandela ukhusela nokusingqongileyo.Ukwenza amanzi kunye nebhotile yokuthambisa iyahambelana nempompo kunye nokugubungela, kwaye ibhotile yekrimu enegasket etsalwe ngesandla kunye nesigqubuthelo
Ukucaciswa kweebhotile zobisi zii-40ml, i-80ml, i-100ml kunye ne-120ml. Iibhotile ze-Cream ziyafumaneka nge-30g kunye ne-50g ngobukhulu benkampani.Ukushicilela kwesikrini, ukunyathela okushushu, ukubanda, ileyibheli, umbala wokuprinta kunye nezinye iinkqubo, siya kuyikopa ngokugqibeleleyo imifanekiso ukubonelela, ukuqinisekisa ukoneliseka kwakho.
1. Ixabiso: Ixabiso kwiphepha alinanto ngaphandle kwebhotile, ngaphandle kwenkqubo. Nceda unxibelelane nenkonzo yabathengi malunga nekoteyishini ethile
2.Isampulu: Isampulu ngokubanzi ayinambala webhotile ebonakalayo kunye nebhotile.
Ukuba ufuna, sinokubonelela ngesampulu kuwe ukuze uqinisekise isitayile sokugqibela.Ngokuba sinesikrini sokushicilela, ukunyathela okushushu, ukubanda, ileyibhile, umbala wokuprinta kunye nezinye iinkqubo, ukuze sikwazi ukwenza ngokwezifiso amagama ahlukeneyo kunye neepateni kuwe. Iinkonzo zonxibelelwano zonxibelelwano malunga neenkcukacha, emva koko ubhatala idipozithi, kwaye siza kuyivelisa imveliso ngobuninzi ngokwesampulu.Okokugqibela, imveliso ithunyelwa kuwe kwaye ihanjiswe kwintlawulo eseleyo emva kokwamkelwa kwakho.Ngoko isivumelwano sethu senziwe.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda unxibelelane nathi. Sijonge phambili ekusekeni ubudlelwane beshishini kunye nawe!
Egqithileyo Ukupakisha kwezithambiso zexabiso eliphambili kuseta iiglasi ezingenanto zeebhotile zobuhle kunye neejagi
Okulandelayo: Ulusu lobuqu lokuthambisa iglasi yokuthambisa yeglasi kunye neebhotile zebhotile yokuthambisa iseti yokuthengisa